Haweeneyda xagjirka midigta fog oo markan ku guuleysan karta doorashada Faransiiska. - NorSom News
Marine Le Pen: Hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Faransiiska.
Hoggaamiyaha garabka siyaasadda dhexe ee Faransiiska Emmanuel Macron ayaa doorashada madaxweynaha ee wareegga kala reebtada ah ee 24-ka April, 2022 ku wajihi doona hoggaamiyaha midigta fog Marine Le Pen.
Natiijadan ayaa ka dhigan in Marine Le Pen oo hogaamisa xisbiga xagjirka midigta, ay markii ugu horeysay fursad dhab ah u heli karo inay ku guuleysato doorashada. Ayna hogaamiso dalka Faransiska. Arrintaas oo saameyn weyn ku yeelan karto dalalka kalee Yurub.
Xigasho/kilde: Rueters + VOA SOMALI